बाइस वर्षे युवाले निर्वाचनमा गाउँ पालिकाको अध्यक्षमा रचे इतिहास.... - Singhadurbarnews
बाइस वर्षे युवाले निर्वाचनमा गाउँ पालिकाको अध्यक्षमा रचे इतिहास….
सर्लाही । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएका २२ वर्षे युवा राजाबाबु यादव सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी भएका छन्।
रामनगर गाउँपालिकाको अन्तिम मत परिणामअनुसार राजाबाबुको जित सँगै सर्लाहीमा माओवादी केन्द्रले जितको खाता खोलेको छ। यादव चार हजार ८१ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनले निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा झण्डै दोब्बर मत पाएका छन्।
मत परिणामअनुसार यादवका निकटतम् प्रतिस्पर्धी उनकै काका हरिनन्दनप्रसाद यादव छन्। उनले नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । हरिनन्दनले २३ सय ३९ मत मात्र प्राप्त गरेका छन्री।
गाउँपालिकको उपाध्यक्षमा पनि माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवार गीतादेवी साह ३५ सय २३ मतसहित विजयी भइन्। उनको निकटतम् प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कोशिला साहले २६ सय ३७ मतमात्र प्राप्त गरिन।
यस्तै, स्वन्त्र उमेद्वारी दिएका निवर्तमान अध्यक्षका छोराले केएस राहुल बर्माले १६ सय सात मत मात्र प्राप्त गरे। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा यहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद बर्मा निर्वाचित भएका थिए। उनको गत बर्ष असारमा निधन भएको थियो। सुरुमा उनकै छोरालाई कांग्रेसको तर्फबाट टिकट दिने भनिए पनि नदिएपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए।
गाउँपालिका अध्यक्षमा विजयी उम्मेदवार राजाबाबु सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का प्रभावशाली माओवादी केन्द्रका नेता एवं पुर्व सांसद शिवपुजन रायका जेठा छोरा हुन् । रामनगर गाउँपालिका समेत गरी सर्लाहीमा तिन वडा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । धन्कौल गाउँपालिका र हरिपुर नगरपालिकाको मेयर(उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भइसहेका छन् ।
यस्तै, रामनगर गाउँपालिकाको वडाध्यक्षमा १ नम्बर वडामा माओवादी केन्द्रका ब्रह्मदेव चौधरी, २ नम्बरमा माओवादी केन्द्रका सदानन्द यादव, ३ नम्बरमा माओवादी केन्द्रका अजय यादव, ४ नम्बरमा नकपा एमालेका वीरेन्द्र ठाकुर, ५ नम्बरमा माओवादी केन्द्रका श्रीन्नदन प्रसाद यादव, ६ नम्बरमा नेपाली कांग्रेसका गुदर साह, ७ नम्बरमा नेपाली कांग्रेसका गौरी शंकर पण्डित कुम्हार विजयी भएका छन् ।
News Views: 204
वि.सं.२०७९ जेठ २ सोमवार २०:२५
तपाइको आजको भाग्य र राशिफल कस्तो छ!
एसपीपीमा संलग्न नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसक्यौँः गृहमन्त्री...